कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिमा खोपले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिमा खोपले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ?
कमला गुरुङ बिहिबार, माघ २९, २०७७, ०७:२१:००
काठमाडौं- कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा सामान्यता ज्वरो आउने, टाउको तथा शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखिने गरेको छन्। यद्यपि हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा गम्भीर खालको असर भने नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिकित्सक अनुसार खोप लगाएपछि ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु जस्ता प्रतिक्रिया देखिनु सामान्य हो। तर खोप लगाएपछि एलर्जी हुनु, वान्ता हुनु, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुनु भने गम्भीर खालका असर हुने चिकित्सक बताउँछन्।
कोरोना संक्रमण निको भइसकेका व्यक्तिमा खोप लगाउँदा बढी र संक्रमण नभएका व्यक्तिमा कम असर देखिन्छ? भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ। यही जिज्ञासा हामीले भाइरोलोजिस्ट डा लुना भट्टलाई राखेका छौं। यो विषयमा उनले दिएको जानकारी उनकै शब्दमाः
खोप लगाइसकेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया देखिनु सामान्य हो। ज्वरो आउने, टाउको दुख्नु भनेको त खोप लगाइसकेपछि शरीरले देखाउने प्रतिक्रिया हो। यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्छ।
खोपले देखाउने प्रतिक्रिया पनि व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। कसैलाई यी समस्याहरु देखिन सक्छ भने कसैलाई देखिदैन। खोप लगाएपछि सबैलाई देखिन्छ नै भन्ने छैन। किनभने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ। कोभिड पनि कसैमा गम्भीर खालको भयो भने कसैमा सामान्य किसिमको मात्र भयो।
कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिले खोप लगाउँदा झन् रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। तर पहिले संक्रमित भइसकेका कारण नै टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने भन्ने चाँही हुँदैन। त्यो त खोप लगाएपछि खोपले काम गर्न थाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर ज्वरो एकदमै धेरै आयो, वान्ता अनि एलर्जी भयो, निकै गाह्रो भयो भने मात्र डराउनुपर्छ। तर सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भयो भने चाँही अन्यथा लिनु हुँदैन।
कोभिड मात्र होइन कुनै पनि बिरामी भइरहेको अवस्थामा खोप लिनु हुँदैन। खोप पायो भन्दैमा केही नबुझी लगाउन हुँदैन। सबै बुझेर आफ्नो शरीरिक अवस्थालाई ध्यान दिएर मात्र खोप लगाउनुपर्छ।